साउन र वर्षाका लागि कस्तो मेकअप उपयुक्त हुन्छ ? - सल्लाह - नारी
ब्युटिसियन,पल्स ब्युटिपार्लर, इन्द्रचोक
साउन अर्थात् वर्षामा पसिना आउने भएकाले मेकअप टिकाउन वाटर प्रुफ मेकअप गर्नुपर्छ । दिउँसो मेकअप गर्दा लाइट ओयल फ्रि फाउन्डेसन प्रयोग गर्न सकिन्छ । वर्षामा लुज पाउडर वा ट्रान्सलुसन पाउडर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साउनमा म्याट लिपिस्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ भने आँखामा वाटर प्रुफ मस्कारा तथा वाटर प्रुफ लाइनर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मेकअप गर्दा बेसको सही छनौट गर्न सक्नुपर्छ । यदि चिकबोन ठूलो भए डार्क सेड र लाइट सेड मिलाएर कटिङ गर्ने । फेस लामो छ भने चिकबोनबाट हल्का राउन्ड सेपमा लाने । राउन्ड सेप फेसमा चिकबोनबाट हल्का रूपमा ज लाइनमा लाने । ओठमा लिपिस्टिक लगाउनुअघि हल्का फाउन्डेसन लगाउँदा लिपिस्टिक बढी टिक्छ । ओठको सेपअनुसार लिपलाइनरले कटिङ गर्ने, सेप मिलाउने अनि हल्का मर्ज गर्ने । वर्षा तथा साउनमा पिंक, पिच तथा रेड कलर बढी खुल्छ । वर्षामा छाला बढी तैलीय हुने हुँदा राति सुत्नुअघि मेकअप रिमुभरले राम्रोसँग मेकअप पुछ्नुपर्छ ।
साउन महिना मेहन्दीको मौसम पनि हो । अहिले के–कस्ता डिजाइन फेसनमा छन् ?
साउन महिना त्यसै हराभरा हुन्छ । साउनलाई मेहन्दीको महिना पनि भनिन्छ । मेहन्दीलाई सगुनका रूपमा लिइन्छ । त्यसैले हरेक शुभ कार्य, विवाह, तीज तथा पवित्र महिना साउनभरि नै मेहन्दी लगाउने चलन छ । इन्डियन, अरेबिक, पाकिस्तानी, इन्डो अरेबिक, मोरोक्कन, ग्लिटर, मुगाली, मल्टी कलर, फ्लोरियल, बंगाली आदि मेहन्दी अहिले बजारमा छन् । नेपालमा मेहन्दीको प्रचलन प्रारम्भ भएदेखि नै इन्डियन मेहन्दी बढी चलेको पाइन्छ । यो साउनमा हेबी इन्डियन डिजाइनभन्दा इन्डो इन्डियन डिजाइन, अरेबिक डिजाइन विशेष रोजाइमा छ भने कलरफुल मेहन्दी तथा फ्लोरल मेहन्दीको पनि क्रेज देखिन्छ ।